Elton Chigumbura - latest cricket news, match reports & comment
Zimbabwe tour of Pakistan was very memorable - Elton Chigumbura
Former Zimbabwe skipper Elton Chigumbura admits that the tour of Pakistan in 2015, which marked the return of international cricket to the Asian country, was a very memorable experience for the team.
Masakadza to take over from Chigumbura as Zimbabwe captain
Zimbabwe have picked Hamilton Masakadza to lead the national team in all the three formats of the game after Elton Chigumbura stepped down from the position in January.
Zimbabwe all-rounder Elton Chigumbura has stepped down from the captaincy after leading his team to a series-levelling 18-run victory against Bangladesh in the fourth Twenty20 International in Khulna.
Ambati Rayudu scored an unbeaten ton to resurrect the innings after a top order collapse and post enough on the board to just stave off a spirited Zimbabwe chase as India won the first One-Day International in Harare by four runs.
Thigh Injury Rules Chigumbura Out Of Ireland Game
Zimbabwe captain Elton Chigumbura, who sustained a thigh injury during the match against Pakistan, has been ruled out of his side’s crucial encounter against Ireland on Saturday.
South Africa Crush Zimbabwe For Clean Sweep
Even with Hashim Amla and AB de Villiers rested, and two debutants in Rilee Rossouw and Mthokozisi Shezi, South Africa thrashed Zimbabwe by seven wickets in the third and final One-Day International in Bulawayo.
Zimbabwe Name ODI Squad
Zimbabwe have named a 17-man squad for their three-match One-Day International series against South Africa which begins in Bulawayo on Sunday 17th August.
Chingoka Steps Down As Zimbabwe Make Major Changes
Zimbabwe Cricket (ZC) has announced a number of changes with chairman Peter Chingoka stepping down and new coaching and captaincy appointments also being confirmed.
Zimbabwe had to comprehensively beat the United Arab Emirates to stay in the hunt to qualify for the Super 10s of the ICC World Twenty20 and they did so, completing a five-wicket win with more than six overs to spare.